Wasaarada maaliyadda oo sheegtay in lacago cusub la daabacayo – Kalfadhi
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa billihii dambe xooga saartay daabicista lacag cusub oo shillin Soomaali ah kadib markii ay cabasho badan ka timid ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed,sida wasaarada maaliyadda ay sheegtay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducayle Bayle ayaa sheegay in Bankiga Dhexe uu daabici doono lacago cusub kadib marka ay soo dhammaadan wada tashiyo imminka socda.
‘’ Shalay ayaan ku caddeeyay intii aan ka hadlayay shirka jaraa’id ee billaha ah lacagtan hadda la soo bandhigay ee 5 kun iyo 10 kun ma ahan middii saxda ahayn. ‘’ Nashqadda saxda ah waxaa soo saari doona Bankiga dhexe marka ay dhammaadan wada tashiyo hadda socda,’’ ayuu wasiir Bayle.
Dowladda Soomaaliya ayaa u baahan 41 milyan oo dollar si ay u soo daabacdo lacago cusub oo Shillin Soomaali ah.
Dugsiyada hoose oo manhaj cusub loo sameeyay 28 sanno kadib